Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - YTpals
Iibso YouTube Subscribers
Adeegyada Lacag bixinta
Iibso Iibsiga Boostada YouTube
Iibso Saacadaha YouTube Watch
Soo iibso Views YouTube
Iibso YouTube Likes
Soo iibso Faallooyinka YouTube
Soo iibso YouTube saamiyada
Iibso Codka YouTube
Iibso Qiimaynta Kanaalka YouTube
Iibso YouTube Video SEO
Iibso Naqshadeynta Naqshadeynta YouTube
Views YouTube Free
Soo iibso Instagram Followers
Iibso Instagram-ka Si aad u heshid Instagram
Soo iibso Instagram Likes
Iibso Instagram-ga Iibso
Soo iibso Instagram Views
Soo iibso Instagram Comments
Iibso Heshiiska Xirmooyinka Suuqgeynta Suuqa Instagram
Kuwa Raaca Bilaash Bilaash ah
Soo iibso Laba Tartiibayaal
Soo iibso Twitch Channel Views
Soo iibso Pinterest Followers
Soo iibso Pinterest Likes
Soo Iibso TikTok fans / Followers
Soo Iibso Likes TikTok
Soo Iibso Muuqaalada TikTok
Soo Iibso Saamiyada TikTok
Iibso TikTok Faallooyinka
Soo iibso SoundCloud Plays
Soo iibso SoundCloud Downloads
Soo iibso SoundCloud Followers
Soo iibso SoundCloud jecel
Soo iibso SoundCloud Comments
Soo iibso SoundCloud Reposts
Soo iibso Spotify Plays
Soo iibso Liiska Bandhigyada Playlist
Soo iibso kuwa raacaya
Hel Macaamiisha bilaashka ah ee YouTube-ka
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu xukumaa habka ay YTpals u aruuriso, u adeegsato, u ilaaliso isla markaana u siidayso macluumaadka laga soo ururiyey isticmaaleyaasha (midkasta, “Isticmaale”) ee bogga https://www.ytpals.com ("Site"). Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu quseeyaa Bogga iyo dhammaan alaabada iyo adeegyada ay bixiso YTpals.
Macluumaadka aqoonsiga shakhsiga
Waxaan u ururin karnaa macluumaadka aqoonsiga shaqsiyaadka adeegsada qaabab kala duwan, oo ay kujirto, laakiin aan ku xaddidneyn, marka Users ay soo booqdaan bartayada, diiwaangeliso barta, amar ku bixiso, rukumo joornaalka, buuxiso foom, iyo xiriir la leh howlo kale, adeegyo, astaamo ama kheyraad aan ka helno degelkeena. Isticmaalayaasha ayaa la weydiisan karaa, sida ku habboon, magaca, cinwaanka emaylka, cinwaanka boostada. Ma ururinno macluumaadka kaarka deynta. Isticmaalayaasha ayaa laga yaabaa, si kastaba ha noqotee, inay booqdaan bartayada si qarsoodi ah. Waxaan ka soo uruurin doonnaa macluumaadka aqoonsiga shaqsiyaadka kaliya haddii ay si iskood ah u gudbiyaan macluumaadka noocaas ah. Isticmaalayaashu marwalba way diidi karaan inay soo bandhigaan macluumaadka aqoonsiga shaqsiyadeed, marka laga reebo inay ka hor istaageyso inay ka qeyb galaan nashaadaadka la xiriira Xarunta qaarkood.
Macluumaadka aqoonsi Non-shakhsi
Waxaa laga yaabaa inaan macluumaad ka soo ururiyaan aqoonsiga non-shakhsi ah oo ku saabsan Users mar kasta oo ay ula falgalaan noo Site. Macluumaadka aqoonsi Non-shakhsi ka mid noqon kara magaca browser ah, nooca computer iyo warbixin farsamo ee ku saabsan Users hab oo ah ku xidhnaanta noo Site, sida nidaamka qalliinka iyo kuwa bixiya adeegyada Internet faa'iideysan iyo macluumaadka kale ee la midka ah.
cookies Web browser
Our Site isticmaali karaan "cookies" si kor loogu qaado waayo-aragnimo User. Web browser User ee meelaha cookies ay ku drive adag ujeedooyin diiwaan-galinta iyo mararka qaarkood si ay ula socdaan macluumaadka iyaga ku saabsan. User waxay dooran karaan inay dhigay web browser ay leedahay inaad diido cookies, ama inay kugu baraarujiyaan markii cookies ayaa lagu soo diray. Haddii ay sidaas sameeyaan, ogow in qaybo ka mid ah Site ayaa laga yaabaa in aan sii fiican u shaqeyo.
Sida aynu u isticmaalaan macluumaadka la ururiyey
YTpals waxaa laga yaabaa inay soo aruuriso oo u isticmaasho isticmaaleyaasha macluumaadka shakhsiyeed ujeeddooyinka soo socda:
- Si loo hagaajiyo adeegga macmiilka: Macluumaadka aad na siiso wuxuu naga caawiyaa ka jawaab celinta codsiyada adeegga macaamiishaada iyo baahiyaha taageerada si hufan.
- Si loo hagaajiyo Bartayada: Waxaan u adeegsan karnaa jawaab-celinta aad bixiso si aan u hagaajino alaabadayada iyo adeegyadeena.
- Si loo socodsiiyo xayeysiin, tartan, sahamin ama astaamo kale oo Bog: Si loo diro isticmaaleyaasha macluumaadka ay ku heshiiyeen inay ka helaan mowduucyada aan u maleyneyno inay iyaga danayn doonaan.
- Si loo diro emails xilli xilliyeed ah: Waxaan u adeegsan karnaa cinwaanka e-maylka si aan ugu dirno macluumaadka isticmaalaha iyo cusboonaysiinta la xidhiidha amarkooda. Waxaa kale oo loo isticmaali karaa in looga jawaabo weydiimahooda, su'aalaha, iyo / ama codsiyada kale. Haddii Isticmaalaha go'aansado inuu ka galo liiskayaga boostada, waxay heli doonaan emayllo ay ku jiri karaan wararka shirkadda, cusboonaysiinta, badeecada laxiriirta ama macluumaadka adeegga, iwm. Haddii waqti kasta uu Adeeggu jeclaan lahaa inuu ka saaro rukhsadda helitaanka emayllada mustaqbalka, waxaan ku darin faahfaahin faahfaahsan. rukhsad ka bixi rukhsaynta xagga hoose ee emayl kasta.
Sida aynu ilaalino macluumaadkaaga
Waxaan la qaato ku dhaqanka ururinta xogta ku haboon, kaydinta iyo processing iyo tallaabooyin ammaan si aan difaaco haysani, Ebana, siidaynta ama burburinta macluumaadkaaga shakhsiyeed, username, password, macluumaadka macaamilka iyo xogta lagu kaydiyaa on our Site.
Isweydaarsiga xasaasiga ah iyo macluumaadka gaarka loo leeyahay ee ka dhexeeya Bogga iyo adeegsadayaashu waxay ku dhacayaan khadka isgaarsiinta ee sugan ee SSL waxaana lagu keydiyay oo lagu ilaaliyaa saxeexyada dijitaalka ah.
Wadaagista macluumaadkaaga shakhsiyeed
Kama iibinno, kama ganacsanno, ama kireyno Adeegsadayaasha aqoonsiga shakhsiyadeed kuwa kale. Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadka guud ee iskugeynta macluumaadka tirakoobka ee aan lala xiriirineynin macluumaad aqoonsi shaqsiyeed ee ku saabsan booqdeyaasha iyo isticmaaleyaasha shuraakadaheena ganacsiga, kuwa ku xiran xiriirka iyo xayeysiiyayaasha ujeeddooyinka kor lagu soo sheegay.
Isbedelada Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this
YTpals waxay leedahay awood ay ku cusbooneysiiso siyaasadan qaaska ah waqti kasta. Markaynu sidaa yeelno, waxaan dib u eegi doonnaa taariikhda la cusboonaysiiyay ee ku taal xagga hoose ee boggan. Waxaan ku dhiirigelineynaa Isticmaalayaasha inay si joogto ah u fiiriyaan boggan wixii isbeddel ah ee ku soo kordha si loogu wargeliyo sida aan gacan uga geleyno ilaalinta macluumaadka aan ururinno. Waad qiraysaa oo aad ogolaatay inay tahay masuuliyadaada inaad dib u eegto siyaasadan qaaska ah waqti walbo oo aad ka warhesho isbedelada.
Your aqbalo tibaaxahaas
By isticmaalaya Site this, aad u tilmaamay laydiinka aqbalo siyaasadan. Haddii aadan ku heshiiyaan in ay siyaasaddan, fadlan ha isticmaalin noo Site. Your isticmaalka sii of Site soo socda dhajiyay isbedel Xeerkaas waxa loo aqoonsan doonaa in aad ogoshahay isbedel kuwa.
Sida naloola soo xidhiidho
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this, dhaqanka this site, ama marka aad la dhaqmayso this site, fadlan nagala soo xiriir:
[emailka waa la ilaaliyay]
Dukumentigan waxaa la cusbooneysiiyay ugu dambeysay Janaayo 22, 2019
Qofka ku jira iibsaday
YTpals waa xallinta Suuqgeynta Suuqgeynta Bulsho ee Warbaahinta ee loogu talagalay ganacsiga iyo kanaalada YouTube-ka shaqsiyeed. Waxaan ka caawinaa macaamiisheenna sidii ay u heli lahaayeen macaamiil dheeraad ah, aragtiyo, jeceshahay iyo faallooyinka si kor loogu qaado saamaynta qadka.
Xuquuqda daabacaadda © 2022 YTpals (ytpals.com). All Rights Reserved. Khariidadda bogga
Macaamiisha YouTube oo bilaash ah
Posts Blog dhawaan
5-ta Siyaabood ee ugu Sareeya ee lagu heli karo Daawadayaasha inay ka faalloodaan Fiidyahaaga YouTube
Siyaabaha Xariifnimada leh ee loogu Isticmaalo YouTube-ka sidii Goob Suuq-geyneed
Talooyin loogu talagalay Qorsheynta Jadwalka Daabacaada YouTube
Waa maxay Qorshaha Midabka Wanaagsan ee kanaalkaaga YouTube?
Sida loola tacaalo Algorithm-ka YouTube-ka ee lagu xakameynayo waxa ku jira?
Boggan internet-ka wuxuu adeegsadaa cookies si uu u hubiyo inaad hesho khibradda ugu wanaagsan.